Unyana wam uxelisa abanye abantwana | Oomama Namhlanje
UAna L. | 13/05/2021 12:00 | Phuhliso, Intsapho
Umntwana ufunda ngokuxelisa. Ngapha koko, xa iintsana ziphakathi kweentsuku ezili-12 ukuya kwezingama-21 ubudala, zinokulinganisa ubuso nobuso. Ukusuka apho baya kuxelisa izimbo zomzimba, amabinzana, izandi, amagama, indlela abasabela ngayo, kunye neemoods. Bakhuphela kokubini okungalunganga kunye nokuqinisekileyo kubahlobo babo abancinci okanye kootitshala babo. Kodwa eyona mizekelo ibalulekileyo ifunyanwa ngaphakathi kwenxalenye yosapho.
Nangona kunjalo kukho ubudala apho ukuxelisa kwenziwa phantse ngaphandle kwemidaUkuba umntwana wakho okwelo xesha, kwaye uxelisa abanye abantwana, abantu abadala, abantakwenu abadala, siza kukuxelela ukuba kutheni kunjalo. Kwaye sichaza ukubaluleka kwesipili neurons kwiinkqubo zokufunda.
1 Xa inqanaba lokulinganisa yonke into iqala
2 Unyana wam uxelisa abanye abantwana.
3 Kukulinganisa ntoni?
Xa inqanaba lokulinganisa yonke into iqala
Malunga neminyaka emithathu, inkwenkwe okanye intombazana iya kuxelisa ngaphandle kwemida. Ukuxelisa kuya kuba yindlela yakhe yokuphila. Awunakukhathazeka ukuba umntwana wakho uxelisa abanye abantwana kuba yinto ebalulekileyo yokukhula. Umntwana uxelisa kuba uyayithanda, uyabona kwaye uyabona ukuba izinto zenziwa kufutshane naye afuna ukuzenza.
Umntwana ufuna ukufana nabanye kwaye, ngaphezu kwako konke, uya kuxelisa abantu abadala kuba ufuna ukuba mdala. Lixesha lokudlala oomama, tata. Uya kuhlala uthanda izinto ezithile zomzimba, iintshukumo, okanye amanani abangela ukuba unconywe. Oku kunconywa kubandakanya, ngaphezulu kwako konke, abazalwana abadala.
Ngeli xesha abancinci, kunye nabancinci, kufuneka bazive bekhululekile ngokwaneleyo ukuba bangashukuma xa bekhetha iindlela zabo zokulinganisa. Musa ukuzibamba ekulingiseni kwabo. Sele sithethile ngamanye amaxesha ukuba kufuneka simncede umntwana ukuba aziphathe kakuhle ngemithetho enocwangco, kodwa akufuneki ibe mininzi kakhulu okanye icinezele.
Unyana wam uxelisa abanye abantwana.
Sonke sixelise abanye abafundi eklasini, okanye imisebenzi yesikolo, esifuna ukubonakala ngathi kwaye siyabazi. Ingxaki enokuvela xa uninzi Abancinci baziva benomnqweno ogqithisileyo wokwenza ngokudibeneyo. Oku kunokuba ngumda kwinto entsha kunye nobuchule bokuyila, ngakumbi abancinci.
Kwimeko yabantwana abaye bazalwana okanye oodade abadala, eli iya kuba lelona nani lingumzekelo wokulinganisa ekhaya, phambi kwabazali bakhe. Uya kubona umzobo we ubhuti osondeleyo, ulingana nabo babathandayo kwaye baziva bezinikele kubo. Ubhuti omdala uya kuba ngutitshala oza kuququzelela ukufunda okuninzi.
Unjingalwazi kwi-psychobiology Manuel Martín Loeches, uthethelela ezi ndlela zokuziphatha zokuxelisa ngaphandle nangaphakathi kosapho, echaza ukuba eyona izizathu zabantu zezentlalo. Umnqweno wokuphumelela okanye ukhuphiswano lokufumana izibonelelo kuwo yiyo esikhokelele kule ndlela yokuziphatha.
Siza kukucacisela ukuba yintoni umntwana ukuba alingise abanye abantwana, okanye abantu abadala. Ngale ndlela uya kusiqonda ngcono ukuba kutheni umntwana wakho esenza njalo. Abantwana baqala bajonge kwaye baqwalasele, emva koko bafunde, kwaye ekugqibeleni baxelise. Ndiyabulela koku, bafumana ukubanakho Sebenzisa awakho amathuba okuthetha.
Le nkqubo yokuxelisa, esele sichazile, ivela kwiintsuku zokuqala zokuzalwa kungenxa ye- mirror neurons, efunyenwe nguGiacomo Rizzolatti. I-Mirror neurons luhlobo oluthile lwee-neurons ezivuthayo xa ubani esenza isenzo, kodwa ziyacima xa sibona isenzo esifanayo. Ezi zibuko ze-mirror zenza ukuba ukuqonda-injongo-ukuqonda ukuqonda. Ukuqonda phakathi kwabantu kunye nesenzo kusekwe kwinto yokuba umntwana oxelisa afumane iinjongo neenjongo zokuziphatha komnye umntu.
Kwelinye icala, xa umntwana wakho elinganisa abanye abantwana, phulukana noloyiko lwakho olungaziwayo. Uyazi okanye ucinga ngandlela thile ukuba imodeli ayilingisayo sele eyenzile ngaphambili, kwaye ukuba ihambe kakuhle ngaphambi kokuba aqiniseke. Ngokulinganisa okwenziwa ngabanye abantwana, wonga amandla, kwaye ungawasebenzisela ezinye izinto.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Phuhliso » Unyana wam uxelisa abanye abantwana